Imeyile ngokuthe ngqo esebenzayo! | Martech Zone
Imeyile ngokuthe ngqo esebenzayo!
NgoLwesibini, Januwari 9, 2007 NgoLwesibini, Juni 9, 2015 Douglas Karr
Ndibe nenjongo yokubhala malunga noku ngaphambi koNyaka oMtsha kodwa kuye kwafuneka ndikhuphe i-ol scanner ukuze ndikhuphe le mifanekiso ye-imeyile ethe ngqo endiyifumene kutshanje. Umgca wenyani kukuba ezinye imeyile ngqo isasebenza. Nayi imizekelo emi-3:
UJack Hayhow Ndithumele incwadi yakhe, Ubulumko behagu ebhabha. Ndicinga ukuba esi sesona 'sipho' sam sokuqala njengebhlog! Ndineencwadi ezimbalwa kwindawo yam yasebusuku ngoku ukugqiba- kodwa ndijonge phambili ekumbeni kule. Kwakucocekile ngokwenene ukufumana inqaku elibhalwe ngesandla elivela kuJack kunye nencwadi. Ukuba uJack uthathe ixesha lokundibhalela kwaye athumele incwadi kuthetha ukuba sele kuninzi!
CVS Ikhemesti yandithumela ikhadi ngeeholide indibulela ngokuxhaswa kwam. Yade yatyikitywa ngokobuqu ngumsebenzi ngamnye! I-CVS yam imnandi. Oku kundikhumbuza indawo yokugcina ivenkile ebesikade siyityelela sikhula kwindawo eziseNewtown Connecticut. … Ndimdala ndimdala!). Ukuba i-CVS ibineziqhamo, ngekhe ndiye kuthenga evenkileni kwaphela! Ii-CVS zingqina ukuba ungangumxokelelwane omkhulu kodwa ubaphathe abantu abanjengabamelwane bakho.
Wikimedia Ndithumele ikhadi elinombhalo wokubulela ngomnikelo wam Wikipedia kunyaka ophelile. Ndihlala ndithatha imali yam ye-Paypal kwaye ndibabuyisele kwiiplagi zabaphuhlisi kunye neewebhusayithi ezicela iminikelo- ukuba isoftware okanye inkonzo iluncedo. Ndisebenzisa iWikipedia kakhulu kule bhlog ukuze wonwabe xa uyazi ukuba inxenye yentengiso efunyenweyo yesiza ibuyiselwe kwezinye iisayithi. (Intsalela iyafuneka ukuhlawulela imfundo yonyana wam!).
Kuyathakazelisa kule mihla nakweli xesha lokuba abantu basaqonde ukuba ukubanjwa 'ngumntu' kuthetha ntoni. UJack ngewayendithumelele incwadi yakhe ngeAmazon, kwaye iCVS kunye neWikimedia ngokulula nje zazingandithumelela i-imeyile ndibulele. Ndingummeli omkhulu we-imeyile ... Ndiyayithanda inyani yokuba inokwenziwa ibe yeyomntu kwaye izenzekele. Oku kuye kwathatha umzamo omncinci kwaye ngokuqinisekileyo kubiza ngaphezulu. Oko kundixelela ukuba aba bantu bacinga ukuba ndibalulekile ngokwaneleyo kwishishini labo ukuba kufanelekile ukuba ndenze utyalo-mali kum. Lowo ngumyalezo onamandla, akunjalo?
Olu luhlobo lweposi ethe ngqo esebenzayo. Amanye amawaka amaqhekeza eposi endiyifumanayo apha akafanelekanga ukuba akhankanywe. Ndixelele abathengi ngaphambili ukuba ixesha elifunekayo lokufumana ingqalelo yomntu ngeposi ethe ngqo lixesha elithathayo ukuba bahambe ukusuka kwibhokisi yabo yeposi ukuya kumgqomo wenkunkuma. Khange ndiyitshintshe ingqondo yam kwaphela. Ukuthumela iphakheji ebhalwe ngesandla okanye ikhadi lombulelo ngokuqinisekileyo kuyayithathela ingqalelo!
tags: ileta ngqoukuthengisa ngqoukuthengisa ngokwesiko
Yakho Indawo Yakho!
I-Apple isungula… Ifowuni. Ngaba omnye umntu uzamla?
Jan 9, 2007 kwi-9: 29 AM
Ngokuqinisekileyo. Sifuna ukubanjwa ngumntu-ayisosinye sezizathu zokuba iibhlog zikhulu kangaka?
Abazali bethu abakhulu babedla ngokunxibelelana ngokubhala ngesandla iileta zothando. Namhlanje yiSMS ekhawulezayo. Ayifani ncam, eh?
Jan 9, 2007 kwi-10: 57 AM
> Ubulumko beehagu ezibhabhayo. Ndicinga ukuba esi sesam sokuqala? njengebhlog!
Inkathalo kaDouglas-ubungazi ukuba ukwamkela izipho kungakhokelela kwimikhwa yokuziphatha kwakho ukubuzwa 🙂 LOL
> Ndihlala ndithatha imali yam ye-Paypal kwaye ndibabuyisele kubaphuhlisi beeplagi kunye neewebhusayithi ezifuna iminikelo - ukuba isoftware okanye inkonzo iluncedo.
Ndiqalile ukuyenza le nto nasekupheleni konyaka ophelileyo. Yimvakalelo elungileyo ukuba ube nakho ukufaka igalelo kwabo banikezela ngexesha labo ukwenza izinto esizisebenzisa mihla le.
Jan 9, 2007 kwi-11: 18 AM
Ngaba siyazi ukuba ezi ziqwenga zeposi ngokuthe ngqo zisebenzile kuba ziqhube ukonyuka kwentengiso kwiinkampani ezithumele umkhankaso weposi ngqo kuwe?
Jan 9, 2007 ngo-4: 51 PM
Nasi isaziso kubo bonke abathengisi, ndingabizi, kulula kwaye ndinyanisekile. Ungandithenga, kodwa ndiza kwazisa wonke umntu ukuba ndithengiwe. 🙂
Ndivumelana nawe kwi-Paypal. Ndiyathemba ukuba yinto eqhubekayo. Umthombo ovulekileyo ube ulungile kuthi sonke!
Jan 9, 2007 ngo-4: 54 PM
Njengomthengisi wedatha, kunzima ukulinganisa olu hlobo lweendleko, akunjalo? Ngenxa yokuba awukwazi ukulinganisa into ayithethi ukuba licebo elilungileyo, nangona. Iinkampani ezenza into elungileyo ziqala ukuqhubela phambili. Ndiyakholelwa ngenene ngolunye usuku siya kuba nesalathiso 'senzuzo yoluntu' seenkampani ngenye imini ukuze abantu basebenze neenkampani ezenza okuhle elizweni kunokubi.
Ubuncinci ndiyathemba njalo!
Jan 9, 2007 ngo-10: 52 PM
Ngaphandle kwamathandabuzo, ukwenza into elungileyo kulungile. Kwaye ndingangumntu wokuqala ukufumana emva kweenkampani ezenza izinto ezintle. Ukuchitha ixesha usenza le misebenzi kuqhuba i-ROI engcono kunokuchitha imali kwintengiso kamabonwakude.
Kwiminyaka emininzi eyadlulayo, ndandihleli egumbini elinabantu abavela eHallmark. Bafuna ukwenza inkqubo enkosi ezenzekelayo kwinkampani yam, ebotshelelwe kwinkqubo yeCRM. Kum, oko bekuchasene nale nto uyikhuthazayo. Kukho umgca ococekileyo phakathi kokwenza okulungileyo, ukwenza into ekhangeleka kakuhle, kunye nokuzama ukuqhuba inzuzo. Kwinqaku lakho, ukuba wenza okulungileyo, ukuthengisa kunye neenzuzo kuya kulandela.
Jan 10, 2007 ngo-9: 47 PM
Ndicinga ukuba uluvo lwakho malunga "nokuchukumisa umntu" lusebenza kakhulu.
Siqaphele ukuba ukuthengisa ngeposi ukukhuphela kunye neekiti zemithombo yeendaba ukukhuthaza
inkampani yethu ihlawule ngokubonakalayo. I-imeyile ilungile, kodwa iya kuba
kuncinci kwaye kungathembeki. Ugaxekile kakhulu kunye nengxubevange. Iyacaphukisa.
Imeyile ngqo; Nangona kunjalo, iyaqhubeka nokuvala ukuthengisa, kwaye njengoko usitsho "umntu
Ukuchukumisa ”kubonakala kunceda ukuqatshelwa.
Sifumene ukuba ukudibanisa ubukho bewebhu kwi-intanethi kunye nomkhankaso weposi othe ngqo
isebenza kakuhle kwiinkampani zekhathalogu esizimeleyo Kukho ixabiso elikhulu
kwintengiso yeendlela ezininzi. Akusekho nkampani inokuxhomekeka kwisithuthi esinye sentengiso.
Ndilonwabele kakhulu inqaku lakho… unomfundi omtsha onomdla kum!
Yibize kwaye "iposi yeposi" yokwenyani iyaqhubeka ukungqina